PA007 - Fanairana OMG Emergency Personal Shrill ho an'ny fanolanana, Jogger, vehivavy, ankizy, zokiolona - 45 $ | Vahaolana OMG
PA007 - Fanairana OMG Emergency Personal Shrill ho an'ny fanolanana, Jogger, vehivavy, ankizy, zokiolona - $ 45
ALERT haingana: Amin'ny trangam-pahaverezana, manaisotra ny pensilihazo metaly, ny fanairana manokana dia hamoaka avy hatrany ny feo fampitandreman'ny 120 decibels mba hampandre ny olona manodidina. Hiraikitra tsy tapaka mandritra ny 30 minitra ny siramamy raha tsy averina any amin'ny fitaovana ny pin.
MALAGASY: Ny fisehoana ambany-ambany dia tsy hahatonga ny sain'ny mpanafika na mpiditra an-tsokosoko, fifamatorana tonga lafatra amin'ny kitaponao, fehikibo na kitapo ho an'ny fidirana eo noho eo, miaraka amin'ny jiro LED, mety amin'ny tontolo vonjy taitra maivana ary misy lanja lehibe kokoa.
ASA TARIKA: Ny feo mampihorohoro mahazatra dia mety miteraka fahamalinana, ary amin'ny alalan'ny fampitandremana tsy tapaka, ny manintona ny mpandalo - amin'ny fitadiavana loharano loham-pahefana hanampy, ny fanairana manokana ny decibels amin'ny 120dB, dia afaka manely 330 feet (100M).
FAHATSIAROVANA LEHIBE: Adolantsento, mpianatra eny amin'ny oniversite, vorondolo alina, mpiasa an-trano, zokiolona, ​​mpihazakazaka, mpitsabo mpanampy / mpiasa fiahiana, mpanolotra solo-tena ho an'ny fiarovana.
PRODUCT STRUCTURE: Ampian'ny 3 pC alkaline batteries LR44, Aza ampiasaina matetika raha sendra tsy misy ilana azy, mba tsy ahafahan'ny vokatra tsy miasa raha misy tranga. Manaova fijerena matetika ny vokatra ary manolo ny batterie raha ilaina. Esory ny vintsy mba hanokafana ny fonony aoriana mba hanoloana ny batterie, ny batterie dia mora azo amidy ao amin'ny fivarotana hanoloana.
* Fanairana manokana - 120dB volume anti-steal, anti-fanolanana, vehivavy / antitra / alina jogger / zaza / mpianatra anti-fanafihana, avy hatrany dia navotsotra tamin'ny fisintomana ny fanjaitra.
* Peratra fanalahidy malefaka - ity lakile key ambany ity dia ny firaiketam-po tonga lafatra amin'ny kitaponao, fehikibo na kitapo, mety, fidirana eo noho eo, mba tsy hahatonga ny sain'ny mpanafika na mpiditra an-tsokosoko ny singa lamaody kely.
* Jiro LED namboarina - Jiro LED natsangana, miaraka amin'ny sandany bebe kokoa amin'ny tontolo iainana vonjy maika.
* Noho ny halehibiazina, ny haingon-koditra sy ny lamandy avo lenta, ny fitaovam-piarovana an-tserasera dia manome anao ny karazany mivantana avy hatrany amin'ny vokatra fanairana ny vatanao.
Ny tombontsoa amin'ny alahelohantsika manokana:
Ny fanairana manokana kely dia fomba iray hendry mba hiarovana ny tenanao amin'ny loza mety hitranga. Ny sasany amin'ireo tombony amin'ity safidy ity dia:
+ User friendly design ho an'ny sokajin-taona rehetra.
+ Fitaovana jiro LED natao ho an'ny tontolo iainana ambany tsy taka-maso.
+ Tetikasa lamaody kely toy izany dia tsy hiteraka sain'ilay mpanafika na mpiditra an-tsokosoko.
+ Raha atahorana ianao, dia afaka mampahatsiahy ny hafa momba ilay fomba fiasa, miheno ny fefy 330 (100M).
Izy io koa dia ny fianakaviana, namana, fanomezana lavorary an'ny olon-tiana.
1 x Alarm alarm mainty
1 x boky mpampiasa
2.6 X 1.6 X 0.9 santimetatra
14594 Total Views 9 Views Today
EA034 - OMG Crowd GPS Bluetooth Mini Anti Very…